उसले भन्यो, ‘ए बाबु, नेकपा’ म त ‘मरेँ लाज’ले ! « Janata Samachar
प्रकाशित मिति :9June, 2019 8:52 pm
सबैभन्दा पहिला अस्ट्रेलियाका लागि राजदूतको अफर पाउनु भएका तपाईं चितवन भरतपुर महानगरको पार्वतीपुरका महेशराज दाहाललाई अत्यधिक बधाई । नेकपा नौमहिनामा अत्यधिक विश्वास गर्ने पार्टी हो । यसको पुरानो मूलघर नेकपा एमाले २०५१ सालमा नौमहिने शासनबाट अत्यधिक लोकप्रिय भएकाले पछिल्ला प्रधानमन्त्रीहरु पनि नौमहिने कार्यकालमा सीमित बन्न पुगे । यद्यपि नौमहिनामा के हुँदैन र यहाँ ? तपाईं श्री महेशराज दाहाल नै नेकपा प्रवेश गरेको नौ महिनामै राजदूत पाउन सफल हुनु भयो । यो भन्दा नेकपाले दिनसक्ने अफर अरु के हुन सक्छ ? नेपाली कांग्रेसले तपाईंलाई दिएको नेपाल टेलिभिजनको अध्यक्षमा नेकपा सरकारले निरन्तरता मात्रै दिएन, पार्टीमा ल्याएर राजदूत दिँदा तपाईंले मन खिन्न पार्नु भएकामा हामी अत्यन्त लज्जाबोध गर्दछौँ । तपाईंलाई फ्रान्सको राजदूत बनाउने भनिएको रहेछ, तर अहिले अस्ट्रेलियाको भागमै चित्त बुझाइदिनु हुनु हामी तीन दशक वा त्यो भन्दा बढी पार्टीमा लागेर केही अवसर नपाएका कार्यकर्ताहरु सहानुभूति प्रकट गर्न चाहन्छौँ । तपाईंको चाहना पूरा गर्न नसकेकामा नेतृत्वका तर्फबाट हामी क्षमा चाहन्छौँ ।
यो पार्टी पछिल्लो समय ‘पाटी’ वा पौवा होला भन्ने डर धेरैलाई छ । तर त्यसो होइन । वास्तवमा पार्टी चलाउने नै यसैगरी हो भन्ने बुझाउन खोजिरहेका छौँ । विनोद चौधरीलाई ल्यायौँ, पठायौँ । ६ वटा उपप्रधानमन्त्रीसम्म थेग्न सक्ने विशाल छाती भएको पार्टी पनि हो यो । लक्कीहरुलाई पनि अनलक्की बनाउन सक्ने पार्टी पनि यही भएको यहाँमा अवगत नै छ । सम्बन्धबाट चिजको विकास हुँदै सत्तामा छँदा निकास दिने बानी परेका हाम्रा योग्य नेताहरुले पार्टीका नेता कार्यकर्ता भन्दा तपाईंहरु जस्ता पाटीमा बस्न आउनेहरुलाई मौका दिनेमा नेपाली कांग्रेस भन्दा लोकतान्त्रिक छ यो पार्टी । यद्यपि यहाँ आउनेहरुले मागेको सबै कहाँ पाएका छन् र ? एकनाथ ढकालले सूर्यलाई भोट माग्नु भयो फेसबुक स्पोन्सर गरेर, तर डा. युवराज खतिवडाहरुले भरिपूर्ण पार्टी भएकाले ढकाललाई मन्त्री त के समानुपातिक सांसद पनि बनाउन सकिएन । हामी अत्यन्तै दुःखी छौँ । ढकाललाई कहीँ कतै राख्नेबारे सोच्न नेतृत्वलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ ।
आउन त यो पार्टीमा अखण्ड पार्टीका पुष्पा म्यामहरु पनि आउनु भएको छ । चुरेभावरका बद्री मैनाली पनि हुनुहुन्छ । भृकुटीमण्डप काण्डमा करोड घोटाला भएको भनेर मन्त्रीहरुको मानहानी भएकामा पनि हामी अत्यन्त दुःखी छौँ । वडामा हुने जति कारोबारमा मुछिएर जोगिन मात्र यत्रो दक्षिण एसियाकै ठूलो पार्टीमा आउनु भयो होला र ? यद्यपि अहिले हाम्रा पार्टीमा विभागहरु बन्न बाँकी भएकाले उहाँबारे रिपोर्ट तयार हुन बाँकी छ । अहिले सबै भूमिकामा लागि कोही कुमार झैँ सुमेरु पर्वत भ्रमण त कोही गणेश झैँ भूँडी लम्पसार पार्दै हे.क्वा. धाइरहनु भएकाले पनि हामी निकासमा पुग्न सकेका छैनौँ । बद्री न्यौपानेमाथि अन्याय भएको भए पार्टीले ढिलोचाँडो न्याय दिनेछ । हामी राधाकृष्ण मैनाली, रुपनारायण श्रेष्ठहरुलाई पनि पाखा लगाएर अरुलाई केन्द्रीय सदस्य, मन्त्री, आयोग सदस्य दिन सक्ने धनी पार्टी भएको त उहाँहरुले टीका लगाएकै बेला अवगत भएको अनुमान गरेकै छौँ ।
अर्को एउटा खुशीको खबर सुनाउन चाहन्छौँ, भर्खरै चलचित्र कलाकार संघमा हामीले रवीन्द्र खड्कालाई अध्यक्ष जिताउन सफल भएका हौँ । राजाका शासनमा उहाँले के मात्र गर्नु भएन र ? अहिले उहाँ नेकपा प्यानलबाट बहुमतसहित कलाकार टोली जिताउन सफल हुनु भएको छ । हाम्रो पार्टी रामेश, रायन, मञ्जुल, जेबी टुहुरे, खुशीराम पाख्रिन, बद्री पँगेनीको मात्रै होइन, रवीन्द्र खड्काहरुको पनि हो । बरु माइला लामा, चिरण पुन समातिनेछ, जित्ने ठाउँमा हाम्रो पार्टी नेकपा भने पुग्नेको विगत हेर्न हामीलाई फुर्सद छैन, तपाईंलाई थाहै छ, एकताका नेकपा माओवादीमा प्रवेश गर्नेले रोड जाम गराएर हाम्रा अध्यक्ष कमरेडले टीका पनि लगाउन भ्याउनु भएन, सडकभरि अबिर उडाएर पार्टी प्रवेश गराइएको मीठो इतिहास र त्यसपछिको चुनावमा तत्कालीन पार्टी तेस्रो पार्टी बनेर गौरव कायम गरेको यहाँमा अवगतै छ । खड्का पनि कलाकार हुन्, अभिनय गरे होलान् भन्ठानेर अहिले दिनेश डिसीहरुलाई पाखा पारेर खड्कालाई मूलघर जिम्मा लगाएकामा तपाईंहरु खुशीले गद्गद् भई ट्विट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ । जसरी हामीले मलमल किरी जुनकीरीलाई राष्ट्रिय सभामा लग्यौँ । हाम्रो सोच त अब मन्त्री बनाउने हो, हेरौँ पार्टीले हाम्रो भावना कति प्रतिनिधित्व गर्छ ? माननीय मन्त्रीज्यू भन्दै सलाम ठोक्न हामी आतुर रहेको बेहोरा हजुर अस्ट्रेलिया जानु अघि हे.क्वा.लाई बोधार्थ गराइदिनु हुन पनि अनुरोध टक्र्याउँछौँ ।
यो पटक पत्र लामो भयो । हजुरले पढ्न झर्को नमान्नुहोला, उत्तर दिने त हाम्रो पार्टीमा चलन नै छैन । तपाईंले पनि उत्तर दिनु पर्दैन । बरु हामी पुरानो गीत सुनेर मन बुझाउँला । कुन गीत भन्नुहोला, हामी उदास भएर अरुण थापाको ऋतुहरुमा तिमी सुन्दैनौँ । हामी त बरु प्रवीण गुरुङको गीत सुन्छौँः
माथिबाट को आयो, सालको पात बजाउँदै
हितकारी मायालाई बोलाउँदैै ।
त्यसलाई थोरै रिमेक गरेका छौँः
पद पाउँ भन्दै नेकपा बोलाउँदै ।
अर्को पनि गीत छः
उसले भन्यो ए नानी गाजली, म त मरेँ लाजले ।
यसलाई पनि हामी रिमेक गर्न खोज्दैछौँ, माननीयले मान्नुहोला, नमान्नुहोला । मान्नु भयो भने गीत यस्तो हुनेछः
उसले भन्यो, ‘ए बाबु, नेकपा’ म त ‘मरेँ लाज’ले ।
नेकपाको सदस्यता छापिन बाँकी भएकाले पाउन बाँकी तर
तत्कालीन एमाले र एमाओवादीको संगठित सदस्य कार्ड भएको
बहुमत चोक, नयाँ बानेश्वर